HomeWararka MaantaMudahraad Ay Dhigayaan Taageerayaasha Kooxaha Premier League Oo Maanta London Ka Dhacaya
Taageerayaasha kubada cagta ee 20 ka naadi ee ka ciyaara horyaalka heerka koobaad ee wadanka Ingiriiska ayaa lagu wadaa inuu maanta ka qabsoomo barxada huteel uu ka dhacayo shir ay ku kulmayaan gudiga naadiyada horyaalka Premier League iyo maamulka xidhiidhka kubada cagtu.
Mudahraadkan oo ay taageerayaashu kaga cabanayaan qaaliga tigidhada lagu daawado kulamada, kuna dalbanayaan in qiimo dhimis weyn lagu sameeyo ayaa waxay qoraal arimahaasi iyo kuwo badan oo kale xambaarsan ugu gudbin doonaan, gudoomiyaha xidhiidhka kubada cagta Ingiriiska ee FA, oo ka qayb gallaya shirkan mulkiilayaasha naadiyadu ku yeelanayaan huteel ku yaala badhtamaha caasimada London maanta Khamiista.
Midowga taageerayaasha kubada cagta Ingiriiska ee magacooda loo soo gaabiyo (FSF) iyo shacab aad u tiro badan oo ka kala socda taageerayaasha 20 ka kooxood ee horyaalka England ayaa ka qayb qaadanaya mudahraadkan salmiga ah ee qiimo dhimista tigidhada ciyaaraha lagu dalbanayo.
Qoraalka ay gudbinayaan ayaa arinta ugu weyn ee uu xambaarsan yahay lagu sheegay inay tahay dalab ay ku doonayaan in guud ahaan ciyaaraha oo dhan laga dhigo qiimaha lagu daawanayo ee tigidhka halkii qof £20.
Waxa kale oo ay dalbanayaan taageerayaashu in:
Laga daayo taageerayaasha qiimaha sare ee lagaga iibiyo tigidhada ciyaaraha ay garoomada kale ee aan ahayn ka kooxdooda ugu safraan.
Mudahraadkan ayaa ku soo beegmaya todobaadyo kooban kadib markii kooxaha horyaalka Premier League ay saxeexeex heshiis rikoodh jebis ah oo ay kaga helayaan lacag dhan £5.14bn Telefihshanada baahiyanaya ciyaaraha kuwaas oo kala ah Sky iyo BT Sport, oo la siiyey qandaraas saddex saano ah oo ay ciyaaraha Ingiriiska ku gudbiyaan kana bilaabmaysa 2016-17.
All Goals & Extended Highlights – Carabao Cup – Chelsea 0-0 Arsenal
Leicester Oo Ka Walaacsan In Arsenal Ka Afduubato Kante
19/05/2016 Abdiwahab Ahmed
West Ham 1-0 Chelsea – All Goals & Highlights – Premier League